Favicon Generator: Otu esi eme Favicon
Nke a nwere ike iyi ihe na-enweghị isi, mana oge ọ bụla m rutere saịtị mara mma ma enweghị akara ngosi ọkacha mmasị metụtara na ihe nchọgharị ahụ, ana m eche ihe kpatara ọrụ ahụ agwụbeghị. N'eziokwu, favicon abụghị nke ahụ dị egwu… Achọrọ m ị nweta ihe dị iche na saịtị m na ndị ọzọ:
Ntọala Ntọala Favicon
Ọ bụrụ n’ịtọbeghị favicon maka webụsaịtị gị, ọ dị mfe nghọta. Zọ kachasị mfe bụ idobe faịlụ akara ngosi akpọrọ favicon.ico na ndekọ ndekọ mgbọrọgwụ nke weebụsaịtị gị. Ọ na-ewere mmemme mmemme dị ka Microangelo (a oké icon mmepe ngwa) ma e nwere oké ọzọ akara ngosi ihe e kere eke ngwaọrụ online!
Naanị bulite faịlụ onyonyo ọ bụla na Draịvụ Dynamic, mepụta faịlị, ma dowe ya na ndekọ mgbọrọgwụ gị. Nchọgharị niile nke oge a ga-achọ ma gosipụta akara ngosi a na ogwe adreesị.
Advanced Favicon Mbido
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmesi ike na saịtị gị ma mepee akara ngosi kachasị amasị gị, enwere ụfọdụ ederede HTML ị nwere ike itinye.
Ọ bụrụ na ị na-eji WordPress, ịnwere ike ịgbakwunye koodu ahụ na header.php nke template gị na ngalaba.
Tags: ihe nkiri faviconfavicongenerator favicon
Ọkt 12, 2008 na 8:46 AM
Nnukwu ego, Doug. Ama kama tinye a bit nke anwansi anyị website 😉
http://abitofmagic.no/english - ugbu a na animated favicon.
Ọkt 12, 2008 na 11:22 AM
Dị jụụ animated gif! Mma!
Ọkt 12, 2008 na 9:35 AM
Me favicon bụ n'ezie otu n'ime ihe ndị ụlọ ọrụ weebụ m chọrọ. Ekwusiri m ya ike.
Ọkt 12, 2008 na 11:23 AM
Echere m na ọ kwesịrị ịdị na saịtị onye ọ bụla, Patric. Mụ na onye omenkà mara ihe na-arụ ọrụ na akara ngosi okike yana ọ bụ nka, kwa!
Ọkt 2, 2012 na 7:46 PM
M ka na-eji Microangelo. Ọ bụrụ na ịmaghị, ịnwere ike itinye ọtụtụ nha na favicon yabụ Ọ bụrụ na mmadụ dọkpụrụ ya na desktọọpụ (ma ọ bụ ihe yiri ya) ị naghị arapara na mbipute 16 × 16.
Ọkt 2, 2012 na 8:20 PM
Ekwesịrị m ikwu, site na nkọwa faịlụ akara ngosi bụ nchịkọta nke onyonyo dị iche iche. Favicon generator ga-ekekwa ọtụtụ akwụkwọ ahụ!